FlightGear simulator duuliyaha waa muraayad-furan, simulator freewator ah oo ay diyaarisay Mashruuca FlightGear. Sii-deynta kowaad waxay ku jirtay 1997, illaa iyo hadda waxaa jirey waxyaabo badan oo la sii daayay.
Inkasta oo ay tahay lacag la'aan, FGFS waa simulator aad u fiican oo run ah. Iyada oo la socota simulator isaga nafsad ahaantiisa, wax kasta oo kale ee la xiriira waxay sidoo kale xor u tahay inay soo dejiyaan, isticmaalaan oo horumariyaan dheeraad ah. Si aad u soo dejiso ama haddii aad rabto inaad wax dheeraad ah ka ogaatid, waxaad ku samayn kartaa bogga shabakadda ee FlightGear, www.flightgear.org .
Meelaha ugu muhiimsan ee lagu soo rogi karo diyaaradaha kala duwan, in ka badan 400 iyaga ka mid ah, halkan waa: github.com/FGMEMBERS .
Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan waa inaadan aheyn inaad diiwaangeliso si aad u soo dejiso diyaarad aad rabto.
Muuqaashka waxaa lagu soo rogi karaa laba siyaabood, bogga internetka ama adigoo isticmaalaya nidaamka TerraSync ee dhexdhexaadiyaha. Sidoo kale, waxay kuxirantahay awoodda kombuyuutarkaaga, waxaad dooran kartaa inta u dhaxaysa muuqaalka iyo muuqaalka HD.
FlightGear sidoo kale waxay leedahay shabakad u gaar ah, laakiin nasiib darro shirkadaha diyaaradaha firfircoon, oo aan taageero ka helayn shabakadaha waaweyn ee mp sida VATSIM ama IVAO.
0 Mawduucyada 0 Jawaabaha No mawduucyada
Imtixaan, kaliya tijaabo
Mawduuca ayaa bilaabmay, toddobaadyada 2 maalmood 6 ka hor, by WilliamMag
Last Post 2 toddobaadyo 6 maalmood ka hor
Post Last by WilliamMag
todobaad 2 maalmood ka hor 6
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.139